Abantu baseMelika Batshata eCosta Rica - Indawo Yokufikela Imitshato
Abantu baseMelika Batshata eCosta Rica
Abantu baseMelika batshata kwaye bafuna ukubamba umsitho wabo eCosta Rica banezinto ezininzi ekufuneka beqwalasele, ngakumbi imozulu. Iingcebiso zokucwangciswa komtshato malunga nemicimbi yezomthetho, iiphakheji zomtshato, kunye neenkcukacha ezahlukeneyo zinceda ekwenzeni umtshato omangalisayo kweli lizwe lincinci kodwa lityebileyo ilizwe laseMbindi Merika.
Malunga neCosta Rica
ICosta Rica - ngokoqobo 'kunxweme olutyebileyo' - ibekwe kwindawo ekumhlaba ophakathi kwelizwekazi eMbindi Merika, kwaye eli lizwe lincinci lilinganisa kuphela i-2,700 yeekhilomitha kodwa linepesenti ezi-5 ezothusayo zezinto eziphilayo zehlabathi. Oko kufikelela kwi-12,000 yeentlobo ezahlukeneyo zezityalo, iintlobo zeentaka ezingama-250, iintlobo ezingama-200 zezilwanyana ezanyisayo, kunye neentlobo ezingaphezu kwe-650 zeentlanzi, ezirhubuluzayo kunye nezilwanyana zasemanzini. Ukugcina olu luhlu lutyebileyo lweentyatyambo kunye nezilwanyana, ngaphezulu kweepesenti ezingama-25 zomhlaba wesizwe ukhuselwe, nto leyo edala iindawo ezintle kunye nolungiselelo lwendalo olufanelekileyo kwimitshato yangaphandle.
Iifoto Zomtshato Wasemva Komtshato
I-23 Ikhekhe lomtshato Iingcamango zesilayidi kuwo nawuphi na umtshato
Imifanekiso Yomtshato Wangaphandle
Ngapha koko, ngaphezulu kwe-1,300 yeekhilomitha zonxweme kunxweme lweCaribbean kunye nePasifiki ilungile kwimitshato yaselwandle. Phakathi kwaloo manxweme, izibini zinokufumana iintaba ezirhabaxa, amawa aphakamileyo, amachibi acocekileyo, iintaba-mlilo ezinamandla, amahlathi ashinyeneyo, kunye nolunye uluhlu lwezinto ezinokuthi zilungele umtshato wabo waseCosta Rican.
ICosta Rica ineentlobo ngeentlobo zemimandla yemozulu, kodwa izibini kufuneka zikulungele ukumelana nemozulu engalindelekanga. Ixesha lemvula lesizwe lihlala lisusela ngoMeyi ukuya kuNovemba kwaye lihambelana namaxesha enkanyamba iAtlantic kunye neCaribbean. Amaqondo obushushu aseTropiki anokungahambi kakuhle kwiinyanga zasehlotyeni, kwaye izibini kufuneka zinxibe ngokufanelekileyo ukonwabela imozulu.
Iingcebiso zezomthetho kubantu baseMelika abaza kutshata eCosta Rica
Ukutshata eCosta Rica kunokuba sisihendo, kodwa izibini kufuneka ziqiniseke ukuba ziphanda iinkcukacha zomthetho ngaphambi kokwenza amalungiselelo omtshato wabo. I-Katolika yamaRoma yinkolo yesizwe esemthethweni, iyenza indawo efanelekileyo yamaKatolika ukuba adibane nawo nawuphina umntu onomdla kwisiganeko esikhethekileyo. Akukho ndawo yokuhlala okanye yovavanyo lwegazi kubantu bamanye amazwe abaza kutshata eCosta Rica, kwaye kubantu abangakholwayo kumaKatolika, amagqwetha ayakwazi ukwenza imithendeleko yoluntu.
Elona candelo lidinisayo ekucwangciseni umtshato oya kuwo kukuqinisekisa ukuba amaphepha afanelekileyo agqityiwe. Izibini ezinomdla zisenokufuna ukubonelela ngala maxwebhu alandelayo ubuncinci kwinyanga enye ngaphambi komtshato wabo eCosta Rica:
Amaphepha oqhawulo-mtshato okanye iileta ezichaza imeko yabo engatshatanga (amaphepha oqhawulo-mtshato anokufuna ukubonisa ukuba umtshato wangaphambili uphele ubuncinci kwiintsuku ezingama-300 ngaphambili)
Ngexesha lomsitho, kufuneka kubekho amangqina amabini angengawo awasapho, kwaye amagqwetha okanye abacwangcisi bomtshato kufuneka bakwazi ukubabonelela xa kukho imfuneko. Ukuze umtshato ube semthethweni e-United States, amaMelika atshata eCosta Rica kuyakufuneka ukuba isiqinisekiso somtshato siguqulelwe, saziswe, kwaye singeniswe kwabasemagunyeni abafanelekileyo- ngokubanzi, igqwetha elongameleyo liya kusingatha ezo nkcukacha.
Qaphela: Ukufumana iimfuno zomthetho ezihlaziyiweyo, izibini ziyacetyiswa ukuba zidibane negqwetha lomtshato laseCosta Rican.
Iindawo zaseCosta Rica zoMtshato
Nje ukuba iinkcukacha zomthetho zilungiselelwe, isibini sinomsebenzi onomdla wokukhetha eCosta Rica ukubhiyozela umanyano lwabo. Izinketho ezidumileyo zezi:
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezinegadi ezininzi, ngakumbi iipropathi zabantu abadala kuphela
Ii-condos okanye iivillas ezingaselwandle
Kufuphi neentaba-mlilo, imiqolomba, amawa, okanye ezinye izinto ezothusayo zejografi
Ukucwangcisa umtshato waseCosta Rican
Ngenxa yokhenketho olunzima lwaseCosta Rica kunye nokuthandwa kwayo njengendawo yomtshato, baninzi abacwangcisi abanamava abanokunceda izibini ukuba zilungiselele umbhiyozo ogqibeleleyo, onje:
ICosta Rica Umtshato weParadesi
Imicimbi kunye nemitshato Costa Rica
Uninzi lwabacwangcisi banikela ngeendlela ezahlukeneyo zomtshato ezinokubandakanya:
Iintyatyambo, ngakumbi izimbali zemveli zetropiki
Ukufota okanye ividiyo
Ikhekhe kunye nezinye iziphungo
Umculo, kubandakanya umculo wesiLatin ukuba uyafuna
AmaNgqina okanye olunye uncedo lwezomthetho xa kukho imfuneko
Iiphakheji zomtshato zihlala zifumaneka ngobukhulu obahlukeneyo bamaqela omtshato, ukusuka kumalungiselelo alula okuvusa umtshakazi nomyeni ukuya kwimisitho ebanzi yemibhiyozo emikhulu. Iindleko ziyahluka ngokusekeke kwiinkonzo ezifumanekayo zomboneleli, indawo yomtshato, ubungakanani bepati, kunye nezinye iinkcukacha.
Abantu baseMelika abatshata eCosta Rica banokulindela amava angalibalekiyo, amahle kweli lizwe lihle. Ngoluhlu olwahlukileyo lwenkcubeko kunye neyendalo eyahlukeneyo kunye nothando, isibheno setropiki, umtshato eCosta Rica ngoyena uya kugcinwa kwizikhumbuzo ezininzi.
Indawo Yasemsebenzini Ukhuseleko Iindlela Imithetho Imiba Ye Babhali Ikrismesi Iincwadi Ne Iifilimu Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi Iimpawu Nophawu Lomntu Khitshini Collectibles
Autism Imiboniso Yesilayidi
Ikhaya Design Accents
yintoni i-penny yentsimbi ka-1943 exabisa ixabiso
yintoni onokuyidibanisa nemango vodka
ukutya okuphezulu kwenja oku-10 okusimahla
unxiba njani ijean ebhityileyo ngeziteki